Horudhac: Real Madrid vs Real Valladolid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya caasimadda Spain) – Gool FM
Haaruun September 30, 2020
(Madrid) 30 Sebt 2020. Kooxda xafidanaysa horyaalka La Liga ee Real Madrid ayaa markii ugu horreysay xilli ciyareedkan caawa ku ciyaareysa garoonkeeda, iyadoo la ciyaaraya naadiga Real Valladolid.
Los Blancos ayaa afar dhibcood ka heshay labadii kulan ee furitaanka horyaalka fasal ciyaareedkan, iyadoo labadaba ay safreen oo ay bannaanka ku soo ciyaareen, halka Valladolid aysan wax guul ah gaarin saddexdii kulan ee ay ilaa iyo haatan ciyaareen.
Taariikhda: Arbaco 30 Sebt 2020
Garsooraha: Cesar Soto (Spain)
Marcelo ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo daafaca bidix ee kooxda martida loo yahay caawa, inkastoo uu seegay kulankii Real Betis sababo la xiriira dhibaato dhanka dhabarka ah.
Toni Kroos ayaa wali qaba dhaawac fudud, sidaa darteed Fede Valverde ayaa lagu wadaa inuu daqiiqado dheeri ah ka helo booska khadka dhexe ee Los Blancos kulankan.
Vinicius Jr iyo Isco ayaa la filayaa inay daqiiqado helaan, haddii uu Zinedine Zidane raaco inuu khadka dhexe ciriiri ka dhigo, iyadoo Rodrygo la heli karo haddii uu ku soo galo 4-3-3.
Jordi Masip ayaa wali shaki ku jiraa kaddib markii todobaad ka hor laga helay Korona Fayras, iyadoo Roberto la filayo inuu sii wato ka sii ciyaarista goolka.
Raul Garcia ayaa la filayaa in laga doorbido Nacho oo uu ka ciyaaro garabka bidix ee daafaca Real Valladolid caawa.
Kike Perez ayaa laga yaabaa inuu daqiiqado ka helo khadka dhexe, halka arrimuhu ay yihiin kuwo aan la hubin marka laga hadlayo afarta hore ee Sergio.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Los Blancos ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Real Valladolid tartammada oo dhan.
>- Real Valladolid ayaa guuldarro la kulantay qeybta hore ee ciyaarta iyo kulanka oo dhammaystiran saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka La Liga ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Kooxda Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool todobo ka mid ah siddeedeedii kulan eeugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka La Liga.
>- Real Valladolid ayaa guuldarro la kulantay saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen (away) ama ay ku soo ciyaareen meel ka baxsan garoonkooda horyaalka La Liga.
>- Kooxda Real Valladolid ayaa laga dhaliyey ugu yaraan labo gool saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahaayeen kulammada horyaalka La Liga.
Muxuu ka yiri Frank Lampard guuldarradii kooxdiisa Chelsea ka soo gaartay Tottenham Hotspur??